Mpitantana fonosana iray no novolavolaina ho an'ny Qt | Avy amin'ny Linux
Mpitantana fonosana ho an'ny Qt no novolavolaina
Naseho ny orinasa Qt andro maromaro lasa izay tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra bilaogy iray izay mikasa ny hampiditra mpandrindra fonosana ao amin'ny installer Qt an-tserasera ianao, izay hanampy amin'ny fanatsorana ny fametrahana tranomboky fanampiny ao amin'ny Qt 6.
Amin'ny fototra, Conan fonosana mpitantana no hampiasaina, natao hizarana trano famakiam-boky amin'ny C / C ++ ary manana maritrano itsinjaram-pahefana izay mamela anao hizara tranomboky avy amin'ny mpizara anao. Heverina izany ny mpitantana ny fonosana mamela ny mpampiasa hampiasa maodely fanampiny amin'ny tahiry ivelany tsy misy be loatra na manasarotra ny napetraka fototra.
Amin'ny dingana voalohany, ny Qt Network Fahefana, ny Qt Image Formats ary ny modely Qt 3D dia kasaina haparitaka, fa amin'ny famoahana ny Qt 6 amin'ny Desambra, hitombo ny isan'ireo modules. Ankoatry ny famoahana modules fanampiny nomen'ny developer Qt, ny manager manager dia afaka ampiasaina ihany koa hahazoana tranomboky amin'ny mpivarotra ivelany.
Miaraka amin'ny Qt 6 izahay dia te hanome fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanararaotana mpitantana fonosana ankoatra ny Qt Online Installer. Ny fiasan'ny mpitantana fonosana vaovao, miorina amin'ny conan.io (https://conan.io), dia ahafahana manome fonosana bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa nefa tsy mampitombo ny fahasarotan'ny tsipika Qt. Ho fanampin'ireo fonosana nomen'ny Qt, ny manager manager dia afaka ampiasaina mba hahazoana atiny avy amina loharano hafa.
Tamin'ny voalohany, manana rary Li b telo fanampiny izahay nomena tamin'ny alàlan'ny mpitantana fonosana: Qt Autorisation Network, endrika Qt image, ary Qt 3D. Tranomboky fanampiny fanampiny no ho hita ao amin'ny kinova Qt 6. Manaraka izany dia manararaotra ny rafitra fandefasana Qt misy izahay ho toy ny backend ho an'ireo tranomboky fanampiny misy amin'ny alàlan'ny mpitantana fonosana. Toy ny Qt 6.0, ny asa ankehitriny dia mbola ao anaty beta ary raisina an-tanan-droa ny hevitra rehetra.
Zava-dehibe ny milaza fa ny rakitra momba ny Conan sy ny fomba fanamboarana resahina dia miasa amin'izao fotoana izao ho an'ny tanjon'ny Android sy iOS.
Ankoatra izany, Qt Company dia namoaka Qt ho an'ny MCU 1.5, famerenana ny rafitra Qt ho an'ny microcontrollers sy fitaovana kely herinaratra. Ny fonosana dia ahafahanao mamorona rindranasa sary ho an'ny elektronika mpanjifa isan-karazany, fitaovana azo entina, fitaovana indostrialy ary rafitra an-trano mahira-tsaina.
Ny fampandrosoana dia tanterahina amin'ny alàlan'ny API mahazatra sy fitaovana fampivoarana mahazatra ampiasaina hamoronana GUI feno ho an'ny rafitra birao.
Ny C ++ API sy ny QML dia azo ampiasaina amin'ny widgets Qt Quick Controls voaova ho an'ny efijery kely. Mba hahatratrarana avo lenta, ny script QML dia adika amin'ny kaody C ++ ary ny fandikana dia atao amin'ny alàlan'ny motera sary misaraka, Qt Quick Ultralite (QUL), izay nohamarinina mba hamoronana interface interface miaraka amina RAM kely sy loharanom-pitaovana.
Ny motera dia natao miaraka amina microcontrollers ARM Cortex-M ary manohana ireo mpandefa sary 2D toy ny PxP amin'ny NXP i.MX RT1050 chips, Chrom-Art amin'ny chips STM32F769i, ary RGL amin'ny chips Renesas RH850.
Izany no antony nampidirantsika tao amin'ny Qt for MCUs 1.5 setrin'ny API vaovao tanteraka ahafahana mampiditra izany.
Voalaza fa Ahitana ampahany roa amin'ny ankapobeny:
Ny namespace amin'ny sehatra dia mampiharihary ireo fiasa tsy mitovy tsy maintsy ampiharinao. Ireo no fiasa antsoin'ny motera Qt Ultralite haingana hifandray amin'ny fitaovana. Misy 18 amin'izy ireo hampihatra farafaharatsiny, ny sasany amin'izy ireo dia tsy voatery.
Ny namespace PlatformInterface manome ny API rehetra ilainao ao amin'ny kaody fampifanarahana ny sehatra hiantsoanao ny motera indray, ohatra mba hikirakirana ireo hetsika mikasika izay voaray avy amin'ny mpanara-maso ny efijery na hiteraka fanavaozana ny motera miorina amin'ny timer na amin'ny fomba hafa.
Tsy voatery hampihatra ny lozisialy rehetra foana ianao rehefa mifindra monina Qt Quick Ultralite amin'ny fitaovana. Ny Qt SDK ho an'ny MCU dia misy ny kaody loharano ho an'ny fampifanarahana amin'ny sehatra rehetra, izay midika fa raha mila mampifanaraka ny Qt Quick Ultralite amin'ny tabilao manokana mifototra amin'ny iray amin'ireo MCU ianao, na raha mila mamindra MCU vaovao avy amin'ny fianakaviana ianao. mifanentana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Mpitantana fonosana ho an'ny Qt no novolavolaina
Mozilla dia mampiditra maotera DeepSpeech 0.9 Speech Recognition Engine